बजार, यात्रा र वितरण प्रणालीमा सुशासन खोइ ? - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Editor-Picks बजार, यात्रा र वितरण प्रणालीमा सुशासन खोइ ?
गरिबको चुलो बल्नै मुस्किल
काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारी फैलिरहेको र चाडबाड नजिकिँदै गर्दा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य एकाएक अकासिन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामै सर्वसाधारणलाई चुलो बाल्नै मुस्किल भएको छ । बजारमा नियमित अनुगमन नहुँदा तरकारीलगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुमाथि बिचौलियाको नियन्त्रण छ ।
सागर पण्डित - October 26, 2020
Uncategorized Kumar Raut - October 23, 2020
थप ८९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ७ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा आज थप ८९९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३९ हजार...
एकै गाउँपालिकाका ५ जनामा कोरोना पुष्टि भएसंगै त्रास बढ्यो
सीपी लोहिया - May 24, 2020
बैतडी । बैतडीको एकै स्थानियतहका ५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीयबासीहरुमा त्रास बढेको छ । भारतबाट फर्केकाहरुमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएकाले स्थानीयस्तरमा...
प्रदेश ६ भक्तबहादुर शाही - August 29, 2020
Not-to-be-missed राजधानी संवाददाता - July 26, 2020
काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्त र गायक कौशलराज खड्काले नयाँ गीत जुनी जुनी...को भिडियो दर्शकमाझ ल्याएका छन् । यी दुईको संयुक्त स्वर रहेको जुनी...
Breaking News नवीन लुईटेल - July 8, 2020
अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेरै छाड्छौं : प्रधानमन्त्री
राजनीति राजधानी समाचारदाता - May 20, 2020
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ता ल्याइछाड्ने बताएका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनमा मंगलबार सम्बोधन...
प्रमुख टेनिस रोका - March 15, 2020
यो पनि पढ्नुहोस आहा, त्यो दसैं ! यो दसैं
दसैंलाई लक्षित गरेर खाद्य...
विजय नेपाल - October 25, 2020